Game Studio Tycoon31.4.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.4.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Game Studio Tycoon 3
Game Studio Tycoon3၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဒါဟာသူတို့အကောင်းဆုံး developer များငှားရမ်းကြောက်မက်ဘွယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းဖန်တီးကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းအဘို့ထိုသူတို့ရောင်းချနိုင်ရှိရာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂိမ်းစတူဒီယိုရှိသည်ဖို့တိုင်းအပျော်တမ်းနှင့်လိုလားသူဂိမ်း၏အိပ်မက်ကိုဖွင့်! ဂိမ်းစတူဒီယိုသူဌေးကြီး3သင်တစ်ဦးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စတူဒီယိုတူအောင်ဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏! သင်ကယှဉ်ပြိုင်ရိုက်နှက်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးစတူဒီယိုဖြစ်လာမှကြာဘယ်အရာကိုများရှိပါသလား?
•ငယ်လေးတစ်ရုံးထဲမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ် Start ကို၎င်း, တစ်ချိန်တည်းမှာကွဲပြားခြားနားသောစီမံကိန်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်ဂိမ်း developer များ၏3လွတ်လပ်သောအဖွဲ့များ tasking စဉ်7အဆောက်အဦးများပိုင်ဆိုင်နှင့် 50 န်ထမ်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်သင့်ဂိမ်းစီးပွားရေးကြီးထွား!
•တယောက်တည်းသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုဂိမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Build, သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထံမှအကူအညီရရန်ကြိုးစားပါ။ တစ်မူထူးခြားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်စနစ်သင်တစ်ဦးအဖြစ်တော့ရောက်နေတဲ့အခါသင်ပိုက်ဆံအဘို့သင့်ကုမ္ပဏီ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုချွတ်ရောင်းဖို့ခွင့်ပြု!
• 50 ကိုဂိမ်းကစားသမိုင်း၏နှစ်ပေါင်းအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မကြာမီကာလအတွင်းကနေ device များအတွက်ဂိမ်းကိုရေးဆွဲပါ။
•သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ပင် MMO ရဲ့ Create! , သင့် MMO ဂိမ်းထောက်ခံ၏အဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန် updates တွေကိုဖန်တီးဖို့နဲ့အသစ်ကအသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကို run!
•သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟာ့ဒ်ဝဲ Create! သင်တစ်ဦးရိုးရာ console ကို, လက်ကိုင်ကိရိယာသို့မဟုတ်ပင်မိုဘိုင်းကိရိယာ (တက်ဘလက် / ဖုန်း) ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲလွတ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲအဘို့ဂိမ်းထုတ်လုပ်တတိယပါတီ developer များအတွက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းအားဖြင့်သင့်စျေးကွက်ဝေစုတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်လွှတ်ပေးရန်တိုင်းဂိမ်းကိုသင့်စျေးကွက်ဝေစုတိုးမြှင့်ကိုကူညီနိုင်!
•သင့်ဂိမ်းများနှင့် hardware အတွက်စျေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ပါ။ အရင်းမှလက်ျာဘက်ချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေ - အနိမ့်စျေးထုတ်ကုန်ထက်ပိုမရောင်းပေမယ့်အမြတ်နည်းဖွင့်ဖို့လေ့!
•3နှစ်စဉ်စည်းဝေးကြီးများ, ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုပစ်မှတ်ထားအသီးအသီးများတွင်ပါ။
•ဒါပေမယ့်ရှုပ်ထွေးပြီးပန်ကာနှင့်အသုံးပြုသူစနစ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပန်ကာအမျိုးအစားဖြစ်သည် preference ကိုနှင့်ပလက်ဖောင်း preference ကိုနှင့်အသက်အရွယ်ရှိပါတယ်။ ဂိမ်းတိုးတက်လာတာနဲ့ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, သင့်ပရိတ်သတ်တွေအဟောင်းတွေကြီးထွားမည်!
•7AI အစတူဒီယိုဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့စတူဒီယိုနှိုငျးယှဉျနှင့်နှစ်စဉ်ဆုများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်။
• Analyze နဲ့ strategize! သငျသညျဖြစ်စေ၌သင်တို့၏ကုမ္ပဏီယူအဘယ်သို့ညှနျကွားခဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်အဘယျသို့ဂိမ်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အမျိုးမျိုးသောဇယားများနှင့်ဂရပ်များကျော်သွန်းလောင်း။
•သင့်ဂိမ်းစီမံကိန်းများနှင့်ရှေ့ဆက်အချိန်ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲကြိုတင်စီစဉ်ထားပါ။ သငျသညျ9စီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးစုစုပေါင်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီ3စီမံကိန်းများအထိတန်းစီနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်မှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့လက်ရှိစီမံကိန်းကိုအတူပြုအခါသူတို့သည်ချက်ချင်းပဲနောက်လာမည့်တစျခုမှပေါ်ရွှေ့မည်ကိုဆိုလိုသည်!
•တစ်ဦး Gamble ယူ. ကြီးမားသောကြေညာသူအဘို့ဂိမ်းပါစေ! သို့သော်ထုတ်ဝေသူအပေးအယူသင့်ရဲ့အတိတ်စီမံကိန်းများအပေါ်အားကိုးဒါကြောင့်မြင့်မားပျမ်းမျှအားဂိမ်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်ဖို့သေချာပါစေသတည်း
•သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာအောင်ကူညီဖို့ 8 ကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလယ်ကွင်း၌သင်တို့၏န်ထမ်းသက်သေခံ။
သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကို လိုက်. နှင့်ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီစက်မှုလုပ်ငန်း၏အန္တိမသူဌေးကြီးစွန့်စားမှုကိုစွဲလန်းနှစ်သက်ရ!
Game Studio Tycoon3အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Game Studio Tycoon3အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Game Studio Tycoon3အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
msi8 စတိုး 99.26k 30.64M
Game Studio Tycoon3ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Game Studio Tycoon3အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Michael Sherwin
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.sherwingames.com/privacy-policy/
Release date: 2018-06-22 01:06:23
Game Studio Tycoon3APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ